တားရော့ပညာရပ် | ဥက္ကာကိုကို
တားရော့မန္တာန် အို…ကောင်းကင်ဘုံ.. …
ကျွန်ုပ်၏အတွေးအကြံအလုပ်များ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကို ပေးပါလော့။
ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်လုံးတွင် မေတ္တာဓာတ်များ၊ ဂရုဏာဓာတ်များဖြည့်ပေးပါလော့။
စစ်မှန်သောစွမ်းရည်၊ အသိဥာဏ်၊ မေတ္တာဓာတ်တို့ကို ကျွန်ုပ်၏၀ိညာဉ်၌ ပေးသနားပါလော့။
ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကင်ဘုံ အား ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ပါသည်။
မြေပြင်ပေါ်မှ ကျွန်ုပ်နှင့်စပ်သမျှသောသူအားလုံးတို့အား ကောင်းကင်ဘုံ၏ အကူအညီ ဖြင့် ကူညီနိုင်ကြပါစေသတည်း။
ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အထူးအောက်မေ့ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံ။
ကျွန်ုပ် ယခုဟောပြောသမျှ မှန်ကန်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသမျှအောင်မြင်ရပါစေသတည်း။
တားရော့ပညာရပ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ခန့် ၁၈ ရာစုခန့်ကပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး ဟီဘရူး၊ ဟေဗြဟေသလ အနွယ်ဖြစ်သော ဂျစ်ပစီတို့ထံမှဆင်းသက်လာပါတယ်။ တချို့က တရုတ်တွေ တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီး အိန္ဒိယမှလာတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။
၂၂ လုံးရှိတဲ့ ဟီဘရူး အက္ခရာတွေ ကို အခြေခံထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဟီဘရူးတို့ရဲ့ ကဗလာဆိုတဲ့ရှေ့ဖြစ်ဟောနည်း ပညာရပ်ကြီးလည်း ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထား တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။
Tar– လမ်း ၊ Rot– ရွှေနန်းတော်လို့အဓိပ္ပယ်ရပြီး Tarot- ရွှေနန်းတော်သို့ သွားရာ လမ်း ဆိုပြီး မြန်မာတားရော့ ပညာရှင်အချို့ကသုံးစွဲကြပါတယ်။
တားရော့ကို ဂျစ်ပစီတွေက ဂမ္ဘီရကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
တားရော့ဖဲချပ်တွေဟာ ၇၈ ချပ်ရှိပြီး မေဂျာကဒ်(၂၂)ကဒ်နဲ့ မိုင်နာကဒ်(၅၆)ကဒ်ရှိပါတယ်။ မိုင်နာကဒ်တွေကို တုတ်၊ ခွက်၊ ဓား၊ ကြယ် အုပ်စု လေးစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် အုပ်စုတစ်ခုတွင် ၁၄ ကဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဖဲထုပ်နဲ့ အခြေခံသဏ္ဍာန်တူညီမှုရှိပါတယ်။
တားရော့ကနေပြီး ဗေဒင်နည်းနာတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကဗလာနည်း၊ ဂဏန်းဗေဒင်နည်း၊ အဆောင်၊ အစီအရင်ပြုသောကယ်လီစမန်နည်း၊ သချာင်္ဗေဒင်တစ်မျိုးဖြစ်သော နျူမရော်လော်ဂျီနည်း စတာတွေ ခွဲထွက်သွားတယ်လို့ လေ့လာမှတ်သားရပါတယ်။
မေဂျာကဒ် ၂၂ ကဒ်ကတော့ တားရော့ဟောသူတွေ အဓိကထားသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခနဲ့ တပည့်ဆရာတွေလည်း မေဂျာကဒ်တွေကိုသာ အဓိကထား ဟောပြော ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုကြပါတယ်။
တားရော့ကဒ်တွေဟာ အီဂျစ်နတ်ဘုရားတွေဖြစ်ကြတဲ့ သော့သ် ၊ အိုင်စစ် နဲ့ အိုဆီရစ် တို့ရဲ့တပည့် သာဝကတွေသုံးခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်သင်္ကေတတွေဖြစ်မယ်လို့ ပြင်သစ်ပညာရှင် ကုတ်ဒီဂါဘလင်က ၁၈ ရာစုနှစ် မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တားရော့ကဒ်တွေကို ၁၈၅၀ လောက်မှာပြင်သစ်မှော်ပညာရှင်အီလီဖတ်စ်လယ်ဗီက အသစ်မွမ်းမံ ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစုမှာလည်း ပုံစံအသစ်တွေကို စာရေးဆရာနဲ့ပညာရှင်တွေက တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကဒ်တွေကိုတော့ ဒီနေ့ခေတ်အထိ အသုံးများနေကြဆဲပါပဲ။
တားရော့မေဂျာကဒ်(The Major Arcana)တွေကို ပါဠိလို မဟာမဉ္စူသာလို့ခေါ်ပြီး မိုင်နာကဒ်(The Minor Arcana)တွေကိုတော့ စူဠမဉ္ဇူသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ တားရော့ပညာဟာ မျက်လှည့်၊ နက္ခတ်နဲ့ တခြား သိပ္ပံပညာရပ်တွေမထွန်းကားခင်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါပြီ။ ဂျစ်ပစီတွေ အကြားအမြင်ရသလို ဟော ပြောနေကြတာလည်း တားရော့ကဒ်နဲ့ပါပဲ။
တားရော့ကဒ်ပြားတစ်ခုစီမှာ တားရော့အနှိုးမန္တာန်တွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ မြန်မာဆရာတွေ ကိုယ်တိုင်သိပ်ရကြပုံမပေါ်ပါဘူး။ အဓိကမန္တာန်တစ်ခုနဲ့သာသုံးစွဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တားရော့နဲ့ပတ် သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို အပြည့်အစုံမဟုတ်တောင် မြန်မာလို ဒီထက်ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာ ဟိန်းလတ်ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ ဂမ္ဘီရအစီအရင်တားရော့ဗေဒင် ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်လိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထုတ်ဝေကြတဲ့ ရှေးစာအုပ်တွေကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
၉။ ရသေ့ (ပုဏ္ဏားဘကွန်း)
၂၂။ အရူး (နံပတ်“၀”ကဒ်ပြား)
၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၄ ၊ ၁၇ ၊ ၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ကဒ်ပြားများမှာ အကောင်းနိမိတ်ပုံ ဟောရမည့်ကဒ်များဖြစ်သည်။
၄ ၊ ၇ ၊ ၈ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ ၊ ၁၅ ၊ ၁၆ ၊ ၁၈ ၊ ၀(၂၂) ကဒ်များမှာ အဆိုးနိမိတ်ပုံ ဟောရမည့်ကဒ်များဖြစ်သည်။
မေဂျာတားရော့ကဒ်များမှာ ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ ၀ါယော၊ တေဇော စသော ဓာတ်ကြီးလေးပါးနှင့်ဆက်စပ်လျှက် ရှိသည်။
မြေဓာတ်။ ။ ၃၊ ၅၊ ၉၊ ၁၅၊ ၂၁ (ကဒ်)
ရေဓာတ်။ ။ ၂၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၈ (ကဒ်)
လေဓာတ်။ ။ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၇၊ ၀ (ကဒ်)
မီးဓာတ်။ ။ ၄၊ ၁၁ ၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀ (ကဒ်)
တုတ်တောင်ဝှေးများ (Wands) – မီးဓာတ် – ရဲရင့်စွန့်စား၊အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု
ခွက်ဖလားများ (Cups) – ရေဓာတ် – ချစ်မေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်မှု
ဓားများ ( Swords) – လေဓာတ် – လှုပ်ရှားရုန်ကန်ရမှု၊ ကံခေမှု
ငါးထောင့်ကြယ်ဒင်္ဂါးများ (Pentacles)- မြေဓာတ် – ငွေကြေး၊ အကျိုးစီးပွား
မိုင်နာကဒ်များမှာ အုပ်စုတစ်ခုလျှင် ၁၄ ချပ်ပါဝင်သည်။ ၁ မှ ၁၀ အထိဆယ်ချပ်နှင့် တော်ဝင်ကဒ်လေးချပ်ဖြစ် သည်။ တော်ဝင်ကဒ်လေးချပ်မှာ – ဘုရင်၊ မိဖုရား၊ မြင်းစီးသူရဲကောင်း၊ မင်းလုလင် တို့ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြုချက်များမှာ- ဘုရင် – စိတ်
သူရဲကောင်း – အတ္တ
မင်းလုလင်- ကိုယ်ခန္ဓာ – တို့ဖြစ်သည်။
————————————– —————————————– ——————————————————————————————————————————————-
တားရော့ဟောကိန်းများအား ကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့်မရနိုင်ဘဲ တွေးခေါ်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်သာ အဓိကကျ ကြောင်း ပညာရှင်များက ခံယူထားသည်။ တားရော့သည် ကမ္ဘာမြေလောကမှာရှိသည့် အရာများ ဖြစ်စဉ်များ ကို စနစ်တကျထည့်သွင်းထား သောအရာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပေါင်းစပ်ထားသောနိမိတ်ပုံနှင့် ဖြစ်နိုင်သည့် အဓိပ္ပယ်အရာများကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ များများတွေးလေ၊ များများ စဉ်းစားလေ ပိုင်နိုင်လေဖြစ်သည်။ တားရော့အဟောမှန်ကန်ခြင်းမှာ အတွေးအခေါ်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည် ဟု ထင်သည်။
နောက်တစ်ခုပြောချင်သည်မှာ တားရော့ကဒ်များ တားရော့ပုံစံများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီကြ ပါ။ ကျွန်တော်လည်းအစက တော်တော်တိုင်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ဟိုတားရော့ထုပ်ကကောင်းမလား၊ ဒီတားရော့ ထုပ်က အဆင်ပြေမလား၊ ဟိုပုံတွေကစုံတယ်၊ ဒီပုံတွေက မပြည့်စုံဘူး… စသဖြင့် ဘဲဥအစရှာမရဖြစ်ခဲ့ရပါ သည်။ တကယ်တော့ပုံစံသာကွဲပြီး အခြေခံက မကွဲလွဲပါ။ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခဆိုလျှင် မြန်မာတားရော့ထုပ်ဆို၍ စမ အင်းပုံစံများနှင့် မြန်မာမှုတားရော့ပြုခဲ့သည်ကိုလေ့လာရပါသည်။
တားရော့မေဂျာကဒ်များကိုပိုင်နိုင်စွာလေ့ကျင့်ပြီးပါက မိုင်နာ ၅၆ ကဒ်ကိုလည်း တို့ထိမိထားရန်လို အပ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ တကယ်တမ်းဟောချက်ဖော်သည့်အခါ မိုင်နာကဒ်များနှင့်တွဲဖက်ဟောပြောပါမှ ခြုံငုံမိမည်ဟုမြင်မိပါသည်။
တားရော့သည် ၀ိဇ္ဇာပညာရပ်ကို လက်ရေးတိုများ၊ သင်္ကေတများဖြင့်ဖန်တီးစီရင်ထားသော ဂမ္ဘီရ ဖဲချပ်များဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကလေးကစားသလို အပျော်မလုပ်သင့်ပါ။ မြန်မာအယူအဆဖြင့်ပြောရသော် နတ်ကိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်နေရာကိုင်မလဲဆိုတာတော့ စမ်းကြည့်ပေါ့လေ။ တားရော့ကို ၀ိဇ္ဇာထွက်ရပ်လမ်း လိုက်သူတွေသုံးကြသည်။ တားရော့ဖြင့် ပညာအဆင့်တက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လေ့လာခြင်းတွင် အလေး ထားစေချင်သည်။ ရိုသေမှုရှိစေချင်သည်။
လေ့လာရာတွင် ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အလုပ်က တားရော့ကဒ်များကို မှတ်သားရမည်။ တားရော့ဟောချက်များကို အတည့်ရောပြောင်းပြန်ရောမှတ်သားရမည်။ တားရော့ဆက်စပ်မှုများကို မှတ်သား ရမည်။ တားရော့နှင့်ပတ်သက်မှုများကို မှတ်သားရမည်။ ဟောပြောနည်းများကိုမှတ်သားရမည်။ လေ့လာ မှတ်သားရင်းနှင့်ပင် တားရော့ကို တစ်ခါတည်းမွေးမြူထားရမည်။ တားရော့နှိုးထားရမည်။ တားရော့နှင့်ကိုယ့် စိတ်နှလုံးသားနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ကျင့်ကြံနေရမည်။ တားရော့ကို ကိုယ့်ချစ်သူကဲ့သို့ မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားရမည်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မအားလပ်သောအချိန်များထဲမှ အချိန်အနည်းငယ်ကိုဖဲ့ပြီး တားရော့ကို လေးနက်စွာလေ့လာသင့်သည်။ တားရော့ကို စတင်လေ့လာနေချိန်တွေမှာ တားရော့ကလည်း ခင်ဗျားကိုပြန် လေ့လာနေသည်ဆိုတာ သတိပြုထားပါ။
တားရော့လေ့လာချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါမည်။ မသန့်ရှင်းသောနေရာမှာ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမလေ့လာပါနှင့်။ စတင်လေ့လာရာတွင် မေဂျာ ၂၂ ကဒ်ဖြင့်စတင်ပါဟုအကြံပေးချင်ပါသည်။ တားရော့ကို စားပွဲပေါ်တွင် အခင်းနှင့်တင်ထားပါ။ ကုလားဖန်ထိုးပါ။ ကုလားဖန်ထိုးရာတွင်ဖဲထုပ်ကို နှစ်ထုပ် ခွဲပြီး ဟိုဖက်ဒီဖက် တဗျပ်ဗျပ်နှင့်သမခြင်းကိုရှောင်ပါ။ နှံ့စပ်အောင်အမြဲလုပ်ပေးပါ။ စတင် လေ့လာချိန်တိုင်း တားရော့မန္တာန်ကိုရွတ်ပေးပါ။ ကျယ်ကျယ်ရွတ်ရွတ်။ တိုးတိုးရွတ်ရွတ်ရပါသည်။ နောက်ဆို တဖြည်းဖြည်းနှင့် မန္တာန်ရွတ်ချိန်တွင် တစ်ကြောင်းရွတ်လိုက်တိုင်း ကျောရိုးထဲမှ စိမ့်စိမ့်တက်လာပါလိမ့်မည်။ တားရော့ကို အမြဲနမ်းပေးပါ။ လေးနက်စွာနမ်းရှိုက်ပါ။ တစ်ချပ်ဆွဲပြီးတိုင်းနမ်းပေးပါ။
တားရော့ကိုယုံကြည်ချစ်ခင်ကြောင်းပြောပြပါ။ ကိုယ်ချစ်သလို တားရော့ကကိုယ့်ကိုပြန်လည်ချစ်ခင် ရန် တိုက်တွန်းပေးပါ။ တားရော့ကိုယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောပြပါ။ တားရော့အစောင့်များကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။ မေတ္တာပို့ပေးပါ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေက ကိုယ်တွေ့တွေဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်သည်။ တားရော့ကိုကုလားဖန်ထိုး၊ အပေါ်အောက် သုံးကြိမ်ထပ်တင်ပြီး ချလိုက်ပါ။ တားရော့ထုပ်ကို ဖဲချိုးသလို ချိုးပါ။ ဘယ်လက်ဖြင့်သာချိုးရပါမည်။ ကျန်သောအပုံမှ အပေါ်ဆုံးဖဲကိုလှန်ချလိုက်ခြင်းဖြင့်စလေ့လာပါ။ အဆိုးကဒ်များကျလာသော်လည်း စိတ်ရှည်ပါ။ ထပ်ဆွဲပါ။ တစ်နေ့ အကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက် ပြုလုပ်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်သောကိုယ့်တားရော့ကဒ်များတွင် အစောင့်များရှိပါသည်။ အဲဒါကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာရှာ ဖွေပါ။ တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာပါလိမ့်မည်။ ရှင်းလင်းစွာမပြောဆိုနိုင်ခြင်းကို နားလည်စေချင်ပါသည်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်သွယ်ပါ။ တားရော့ကို နေ့စဉ်ထိတွေ့လေ့လာနေရင်းနှင့် တွေ့လာရမည်မှာ ကိုယ့်နှင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်သော တားရော့ကဒ်များဖြစ်သည်။ တချို့ကဒ်များဆို ဘာဆွဲဆွဲ ဒီကဒ်သာပေါ်လာလိမ့် ရှိသည်။ ဥပမာ – ကျွန်တော်အမြဲမြင်တွေ့ကျရောက်သည့်ကဒ်များမှာ ကမ္ဘာလောက၊ သေမင်း၊ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်း၊ မှော်ဆရာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုကဒ်များကို ရေမွှေးဖျန်းပေးပါ။ မမြင်ရသောအစောင့်များကို မေတ္တာပို့ပေးပါ။ တားရော့ကဒ်များကို စနစ်တကျ အလေးအနက်မွေးမြူပါ။ ဒီလောက်ဆိုစလေ့လာဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ။
တားရော့ဖဲချပ်တွေကို နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ပေးပါ။ ကိုယ်ကိုင်နေကျဖဲထုပ်က ကိုယ်နှင့်ဓာတ်ကူးမှု လွယ်ကူပြီး ဟောပြောရာတွင် ပိုမိုမှန်ကန်စေပါတယ်။ ကိုယ်ကိုင်တွယ်နေကျဖဲထုပ်ကို သူများကိုပေးမသုံးရ ပါဘူး။ ဓာတ်ပျက်တတ်တယ်လို့အယူရှိပါတယ်။ တားရော့ထုပ်ကို မကြာခဏရေမွှေးဆွတ်ပေးပါ။ တားရော့ကို အရက်တိုက်သည်ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို မိတ်ဆွေယုံကြည်ပါသလား။ ဂျစ်ပစီတွေဟာ တားရော့ကို အရက် နဲ့ဆွတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အရက်မသုံးချင်ရင်လည်း ရေမွှေးနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ပိုးမွှားကင်းစင်စေဖို့၊ တားရော့ဆီကို ပြင်ပမကောင်းမှုအညစ်အကြေးတွေ မ၀င်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။
တားရော့မှာ အတည့်ဟောနဲ့ပြောင်းပြန်ဟောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဖဲချပ်တွေ ကို အတည့်ရောပြောင်းပြန်ရော စီထားပါ။ ရောနှောထားပါ။ ကုလားဖန်ထိုးနေစဉ်မှာ ကိုယ်သိလိုတဲ့ မေးခွန်း ကိုစိတ်ထဲကပြောပြပါ။
မေးမည့်သူကို ကိုယ့်ရှေ့မှာထိုင်ခိုင်းပါ။ သင်ကမြောက်အရပ်ကိုမျက်နှာမူပြီးမေးသူကတောင် အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီးထိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ မဟောခင်လက်ကိုစင်အောင်ဆေးပါ။ ရေမွှေးဆွတ်ပါ။ မေးမယ့်သူကိုလည်း လက်ကိုရေမွှေးဆွတ်ပေးပါ။
တားရော့ကိုစတင်ဟောပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အထက်အောက် သုံးကြိမ်ထပ်ပြီး ဘယ်လက်နဲ့ ချလိုက်ပြီး ဘယ်ဖက်ကိုခွဲထုတ်လိုက်ရပါမယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့အပုံက အပေါ်ဆုံးဖဲချပ်ကိုလှန်ချပြီး ဟောပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဲချပ်လှန်တာကို မေးမယ့်သူကိုလုပ်ခိုင်းရမှာပါ။ ဟောပြောချက်ကို လိုရင်းတိုရှင်းသာလုပ်ပါ။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မဟောပါနဲ့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပေါ်တာကိုရဲရဲဟောပါ။
(၂) အပြာရောင်(သို့မဟုတ်)အနက်ရောင်ပိုးသားပ၀ါ- တားရော့ထုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
(၄) တားရော့အခင်း – တားရော့ဟောရန်အတွက် နှစ်ပေပတ်လည်အနက်ရောင်ပိုးစဖြစ်သည်။
(၅) သစ်သားစားပွဲ- ဟောပြောရန်။
(၆)တုတ်၊ ခွက်၊ ဓား၊ ကြယ်- အစွမ်းထက်စေရန်။
(၁)တားရော့ကို ပိုးစအိတ်တစ်အိတ်နှင့် ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းပါ။
(၂)မိမိခေါင်းအုံးအောက်မှာ အနည်းဆုံး ၈ည။အများဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ထားအိပ်ပါ။
(၃) ခရီးထွက်ရင် ယူဆောင်သွားပါ။
(၆)ဟောတဲ့အခါ နံ့သာချောင်းတုတ်လေးတစ်ခု၊ ကြေးခွက်(သို့)လုံခွက်(သို့)အပ်ထောက်ခွက် တစ်လုံး၊ မောင်းချဓားတစ်ချောင်း၊ ကြယ်ပုံပါတဲ့ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုကို အခင်းထောင့်တွေမှာတင်ထားပါ။
(၇)ဟောကာနီးမှာ လက်ကို ရေမွှေး၊ အရက်တို့နဲ့သန့်စင်ပါ။
(၈)ဟောကာနီးမှာ တားရော့ထုပ်ကို ရင်မှာကပ်ပြီး မန္တာန်ကိုအလေးအနက်ရွတ်ပါ။
(၁၂) အာရုံစူးစိုက်ပါ။ အချိန်ယူဟောပါ။
(၁၃) အရေးမပါတဲ့မေးခွန်းတွေမဖြေရပါ။ အရေးပါသောမေးခွန်းများသာမေးခိုင်းပါ။
အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဖဲတစ်ချပ်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖဲထုပ်ကို နှံ့စပ်အောင် သေချာကုလားဖန် ထိုးပါ။ ဘယ်လက်နဲ့ခွဲလိုက်ပြီး ကျန်အပုံကအပေါ်ဆုံးဖဲချပ်ကိုကောက်လှန်လိုက်ပါ။ အဲဒါအဖြေဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာဟောချင်လည်း ဒီနည်းကအဆင်ပြေပါတယ်။ အတည့်ကျရင်အတည့်ဟော။ ပြောင်းပြန်ကျရင် ပြောင်းပြန်ဟောပေါ့။ ရမလား မရဘူးလား။ အောင်မြင်မလား။ ဆုံးရှုံးမလားဆိုတဲ့ လိုတိုရှင်းမေးခွန်းတွေကို ဟောနိုင်ပါတယ်။
သုံးကြိမ်ကုလားဖန်ထိုး။ ချိုးလိုက်။ ပြီးရင် ပထမတစ်ချပ်ဆွဲချ။ ဒုတိယတစ်ချပ်ဆွဲချ။ တတိယ တစ်ချပ်ဆွဲချ။ (ဟောတဲ့သူဖက်က အတည့်ဆိုရင် အတည့်ဟောပါ)။ ပထမအချပ်က အတိတ်ပါ။ ဒုတိယ အချပ်က ယခုလက်ရှိကာလပါ။ တတိယအချပ်ကတော့ အနာဂတ်လို့ဟောပါ။
နောက်တစ်မျိုးက ပါပဟောနည်း၊ ဆဲလ်တစ်ဟောနည်း နဲ့ ဖဲခုနှစ်ချပ်ဟောနည်းတွေ ပါ။ ဒီနည်းတွေက စလေ့လာသူတွေအတွက် ခက်ခဲမယ်ထင်လို့ ချန်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာလေ့ကျင့်ရမယ့်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းရှုပ်တာမို့စာစီရတာပျင်းတာလည်းပါတာပေါ့လေ။
ဆဲလ်တစ်ဟောနည်း(The Celtic Cross)
နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့နည်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ကျွန်တော်ဖတ်ရတာကတော့ ကံကြမ္မာဖတ်ကြားနည်း၊ တားရော့ဖြင့်ဇာတာဟောပြောနည်း၊ ဆဲလ်တစ်နာရီဟောပြောနည်း၊ တနင်္ဂနွေရာသီဇာတာဟောနည်း၊ ကယ်လတစ်နည်း၊ တစ်သုံးလုံးဖြန့်ခင်းဟောနည်း၊ ဟန်ဂေရီဖဲခြောက်ချပ်ဟောနည်း….. စတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်သလို ဟောပြောကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တားရော့အထုပ်တွေကို ရောင်းချတာသိပ်နည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ တစ်ထုပ်ပါပဲရှိပါတယ်။ Tarot and Magic ဆိုတဲ့တားရော့ထုပ်ပါ။ အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ အရောင်းဆိုင်များ တွင်တော့ ၀ယ်ယူမရရှိနိုင်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာတောင် ရှိတဲ့ဆိုင်မှာပဲရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းက အရုဏ်သစ် စာအုပ်ဆိုင်နဲ့ ပန်းဆိုးတန်းက အင်းဝ၊ စာပေလောက၊ ပညာရွှေတောင်တို့မှာ သွားစုံစမ်းကြည့်ကြပါ။
မြန်မာ ပြည်မှာရှိတဲ့ တားရော့စာအုပ်တွေမှာ တားရော့ဖဲချပ်တွေပါတတ်ပေမယ့် မေဂျာကဒ်၂၂ ကဒ်သာပါတတ်ပါ တယ်။ အဲဒီအတွက် တားရော့ပညာကို ကျင့်ကြံလိုက်စားတော့မယ်ဆိုရင် တားရော့ ၇၈ ချပ်စလုံးပါဝင်တဲ့ အထုပ်တစ်ထုပ်ရှိဖို့လိုပါမယ်။ အပျော်သဘော ကိုယ့်ဘာသာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မေဂျာကဒ်တွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ။ ဆရာဝင်းဇော်(သစ်တော)ရဲ့ မနောမယတားရော့ဟောကိန်း အိတ်ကလေးထဲမှာ တားရော့အစုံပါဝင်ပေမယ့် ကဒ်ပြားတွေပေါ်မှာ ဟောချက်အကျဉ်းတွေကို တစ်ပါတည်း ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ အတွက် အဆင်သိပ်မပြေပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ တားရော့ထုပ်ကိုရအောင်ဝယ်ထားပေါ့ဗျာ။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်လည်း နိုင်ငံခြားကနေမှာပေါ့။ ဈေးတော့ကြီးတယ်ကြားတာပဲ။ ကျွန်တော်တော့ မြင်တောင်မမြင်ဖူးပါဘူး။
တားရော့ကိုလေ့လာပါ။ ဟောကိန်းတွေကို လောလောဆယ်တော့ အလွတ်ကျက်ပါ။ မေဂျာကဒ် တွေကိုပိုင်ပြီဆိုရင် မိုင်နာကဒ်တွေကိုပါတစ်ဆင့်တက်ကျက်မှတ်ပါ။ မိုင်နာကဒ်တွေက ဟောကိန်းနည်းပါ တယ်။ မခက်ပါဘူး။ များတာလေးပဲရှိတာပါ။
မေဂျာကဒ်ဟောကိန်းတွေကို လူကြီးမင်းတို့အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်မှတ်စု ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာတားရော့စာအုပ်တွေကို အားလုံးဝယ်မလေ့လာနိုင်တဲ့၊ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူ တွေအတွက် ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံပြီး ပြုစုထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ဟောကိန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ တားရော့ဆရာကြီးတွေရဲ့ဟောကိန်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာပါ။ ညသန်းခေါင်ယံတိုင်းမှာ သေချာလေ့ လာမှတ်သားပြုစုထားတာဖြစ်လို့ အသင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတွေပြောပြထားတာတွေကိုပဲ ချပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟောချက်တွေကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာဟောပြောကြတဲ့အခါမှ ဖြည့်စွက်ကြ ပါတော့ခင်ဗျာ။ စတင်လေ့လာသူတွေအတွက်တော့ လုံလောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မြန်မာဂျစ်ပစီရဲ့ သန်းခေါင်ယံမှတ်စု ရှင်းတမ်း
ဗေဒင်ပညာရပ်ထဲမှာမပါတဲ့ တားရော့ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး တားရော့ပညာနဲ့ တားရော့ကဒ် တွေကို ကျွန်တော် စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဂျစ်ပစီဆိုတော့ မြန်မာလို ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေကိုပဲ ဖတ်ရှုရတာပေါ့။
တားရော့ကဒ်တွေမှာက သူ့အစွမ်းနဲ့ သူ့ဟောကိန်းနဲ့သူ ရှိနေပါတယ်။ သူ့နိမိတ်ပုံနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ နက်ရှိုင်းခက်ခဲတဲ့ ပညာရပ်ပါပဲ။
ကျွန်တော်စ၀ယ်လိုက်တဲ့ စာအုပ်က ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ညီအရင်း ဆရာဝင်းဇော်(သစ်တော) ရဲ့ မနောမယတားရော့ဟောကိန်း ဆိုတဲ့အရာပါပဲ။ သူက စာအုပ်ကလေးရယ်၊ ကဒ်ပြားလှလှလေးတွေရယ်၊ အပြာရောင်ပ၀ါစလေးရယ်ကို စက္ကူဘူးလေးနဲ့ လက်ဆွဲအိတ်လေးနဲ့ ထည့်ရောင်းတာပါ။ မြန်မာဂျစ်ပစီက အလှကြိုက်တော့ ၀ယ်လိုက်တာပေါ့။ တကယ်တမ်းလေ့လာတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကဒ်ပြားတွေက လှပေမယ့် ဟောကိန်းအနည်းငယ်ကို ကဒ်ပြားအပေါ်ထိပ် အောက်ထိပ်မှာစီရေးထားတာပါ။ အပျော်တမ်း လေ့လာ သူတွေ အတွက်လောက်ပဲ အဆင်ပြေမှာပါ။
အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်အုပ်ထပ်ရှာရပါတယ်။ တားရော့နဲ့ပတ်သက်ပြီး လတ်တလောမှာ တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ အဲဒါက ဆရာဟိန်းလတ် ရေးသားပြုစုတဲ့ ဂမ္ဘီရအစီအရင်တားရော့ဗေဒင် ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ နိုင်ငံခြားကျမ်းပေါင်း ၁၂ ကျမ်းကိုကိုးကားပြီး ပြုစုထားတာပါ။ တော်တော်သဘောတွေ့စရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ တားရော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘော တရားတွေ၊ ဟောကိန်းတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ ဟောပြောနည်းတွေနဲ့ ဂမ္ဘီရဆိုင်ရာအစီအရင်တွေကိုပါ ရေးသား ထားတာမို့ ၀ယ်ယူလေ့လာ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ကျွန်တော်စိတ်မပြေသေးပါဘူး။ ၀င်းဇော်နဲ့ ဟိန်းလတ် တို့ ဘယ်လိုဟောကိန်းထုတ်တယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်သိသွားပါပြီ။ တခြားဗေဒင်ဆရာတွေရော တားရော့ကို ဘယ်လိုဟောကိန်းထုတ်သလဲဆိုတာ ထပ်သိချင်လာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စာအုပ်ဆိုင်တွေပတ်ရှာဖွေပြန် ပါတယ်။ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ စံဇာဏီဘို ကို အရင်တွေ့ပါတယ်။ အသုံးချတားရော့ဟောကိန်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ သူကလည်း တားရော့မေဂျာ ၂၂ ကဒ်ကို သေသေချာချာရှင်းလင်းပြပြီး အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကဒ်ပြောင်းပြန် ဆိုပြီး ခွဲခြားဟောပြထားပါတယ်။ မြန်မာတားရော့အဟော စာအုပ် တွေထဲမှာ သူက စိတ်အရှည်ဆုံးရေးသားသူလို့ အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ပန်းဆိုးတန်းဂုံးတံတားနားက စာအုပ်အဟောင်းတန်းမှာ ဖုန်တက်ပြီး ၀ယ်သူမဲ့ နေတဲ့ တားရော့စာအုပ်ပါးပါးလေးတစ်အုပ်ကိုတွေ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ တင်မော်(ဓာတု)ရေးသား တဲ့ တားရော့ဂမ္ဘီရဗေဒင်ဟောပြောနည်း ပါ။ ပြည်ပစာအုပ် ၁၀ အုပ်ကိုအခြေပြုပြီးရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အတည့်ဟောနဲ့ပြောင်းပြန်ဟောဆိုပြီး ခွဲပြထားတာပါ။ ကံကောင်းမယ့်ဂဏန်းဆိုပြီးတောင်ပါလိုက်သေးတယ်။
နောက်တစ်အုပ်ကတော့ ဆရာဝင်းဇော်(သစ်တော) ပါပဲ။ သူက ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ ဇယားကွက်ကြီးနဲ့ မနောမယလက်ထောက်တားရော့ဟောကိန်း ဆိုပြီးထုတ်ထားတာပါ။ ဟောကိန်းကိုသိချင် ရင် ဇယားကွက်ကြီးမှာ လက်နဲ့ထောက်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို သဘောမကျပေမယ့် တားရော့ဟော ကိန်းတွေပါတဲ့အတွက် ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာတော့ တားရော့ ၇၈ ကဒ်စလုံးကို ဟောကိန်းထုတ်ပြထား တာမို့ သဘောကျမိပါတယ်။
တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ကျွန်တော် ထပ်ရှာပါတယ်။ စာအုပ်အရောင်းဆိုင် တော်တော်များများကို ပြဲပြဲစင်အောင် မွှေနှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်စိတ်တွေ့တာ တစ်အုပ်ပဲရခဲ့ပါတယ်။ နောက်စာအုပ် တွေလည်း ရှိတော့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့တပည့်ကျော် ဆရာဇင်ယော်နီ ရဲ့ ရွှေတဲရော့ စာအုပ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်တွေးနည်း၊ ဟောနည်းများ (ကျက်မှတ်စရာမလိုဘဲ ဟောနိုင်တဲ့အံ့ဘနန်း ဟောကွက်များ) လို့ မျက်နှာဖုံးမှာရေးထားပါတယ်။ တားရော့ကို ဘယ်လိုဆိုလိုချက်ကောက် ဟောပြော ရမယ်ဆိုတာတွေကို သူ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ် ရှင်းပြ ရေးသားထားတာပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်မှာတော့ နည်းနေပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်တွေလို ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် တားရော့လေ့လာသူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။
တားရော့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ မြန်မာတားရော့ဟောကိန်းနဲ့ မြန်မာတားရော့ဖဲချပ် ထုပ်လေးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက ဟောကိန်းတွေက ဆရာဟိန်းလတ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးဖြစ် တာမို့ အဲဒါကိုချန်လှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကဒ်ပြားနဲ့ဟောရာမှာ ယီချင်းဗေဒင်တို့ဘာတို့ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လီမန်နို ကဒ်ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဧကံသဗျာကရဏ ဗေဒင်ကို လည်း ဧကံသကဒ်ပြားနဲ့ဟောလို့ရပါတယ်။ ဧကံသဗျာကရဏ ဆိုတာက ယီချင်းဗေဒင်နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ ဆင်တူပြီး ဆရာမင်းသိင်္ခတီထွင်ထားတဲ့ ပညာရပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ စကြ၀ဠာမနောဓာတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လှိုင်းတွန့်လေးတွေ ရေးခြစ်ဟောပြောရတာမို့ စိတ်စွမ်းအင်ကို သေချာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူမှ ဖြစ်မြောက်တာပါ။ ဧကံသအဟောကဒ်ပြား ဆိုတာက စတင်လေ့လာသူတွေအတွက် လွယ်ကူအောင် ထုတ်ထားတာလို့မြင်ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တားရော့ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဆရာခန့်လို့ခေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလေးစားကြတယ် လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ဆရာမင်းသိင်္ခကိုင်တဲ့ ဖဲထုပ်က ဆရာခန့်ရဲ့ဖဲထုပ်လို့ ဆရာဒဂုန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာ ဆရာ မင်းသိင်္ခက ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိမမှီလိုက်တဲ့အတွက် ဆရာခန့်ရဲ့ ဟောချက်တွေကို မသိသေးပေမယ့် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ တားရော့ဆိုင်ရာ မြန်မာစာအုပ်ငါးအုပ်ရှိနေချိန်မှာ ကျွန်တော်စတင် လေ့လာပါတော့တယ်။ ညစဉ် ည ၁၂ နာရီ သန်းခေါင်ခန့်ကစပြီး မနက် ၂ နာရီအထိ တားရော့ ဟောချက် တွေနဲ့ တားရော့ကဒ်ပြားတွေကို ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
တားရော့ဟောကိန်းတွေကို သေချာလေ့လာကြည့်တော့ မြန်မာဆရာတွေရဲ့ ဟောကိန်းတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူညီတာတွေရှိသလို ကွဲလွဲမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ဆီမှာ မပါတဲ့ ဟောချက်တွေကို တခြားတစ်ယောက်ဆီမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ­ တစ်ယောက်က အကောင်းဟောရင် တစ်ယောက်ဆီမှာ အဆိုးဟောတာကိုတွေ့ပါတယ်။ သဘောတရားတွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ နိမိတ် ကောက်ယူပုံတွေပဲကွဲသွားကြတာပါ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်က ရှိတဲ့တားရော့စာအုပ်တွေကိုစုလိုက်ပါတယ်။ အခြေခံတူညီတဲ့ ဟောပြောမှု တွေကို ဗလာစာအုပ်ပေါ်မှာ ရေးချလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ငါးအုပ်စလုံးက တူညီတဲ့အရာတွေကို စုစည်းပြီး မတူညီတာတွေကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဟောကိန်းတွေကို စဉ်းစားပြီး ကဒ်ပြားနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါတယ်။ အဖက်ဖက်ကတွေးတောပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ဟောကိန်းတွေကို ကဒ်ပြား တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပေါင်းစပ်ပြီး မှတ်စုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ တခြားပတ်သက်ရာ နည်းနာစနစ်တွေနဲ့ အသုံး တည့်မယ့် (ဧကံသဗျာကရဏကဲ့သို့သော) ဗေဒင်ဆိုင်ရာလေးတွေကို ရောနှောပါတယ်။ မှတ်စုထုတ်ပုံ ကတော့ တားရော့ကဒ်ပြားတွေကိုမွေးမြူလေ့လာရင်းနဲ့ မှတ်စုအလုပ်စတော့မယ်ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျလာတဲ့ ကဒ်ပြားကို စာအုပ်တွေကပေါင်းစပ် ထုတ်နှုတ်တာပါပဲ။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကျွန်တော်လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော့်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တာတွေကို မှတ်သားတဲ့ သဘောပါပဲ။ အဲဒါတွေကို မြန်မာဂျစ်ပစီရဲ့သန်းခေါင်ယံမှတ်စု လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း ဖြန့်ဝေဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်လို တားရော့ကိုစလေ့လာကြတဲ့သူတွေအတွက် အသုံး ၀င်ကောင်းဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်လို့ ဖြန့်ဝေမျှရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က တားရော့ပညာရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ တားရော့ဟောပြောနေသူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တားရော့ကို စိတ်ပါဝင်စားပြီးလေ့လာတဲ့ တားရော့ချစ်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ တားရော့နဲ့အတူ တခြားဗေဒင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်အနည်းငယ်ကိုလည်း တို့ထိထုတ်နှုတ်ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ အတွက် အမှားအယွင်းအနည်းငယ်လည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ နားလည်ပေးကြဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် တားရော့ဟောကိန်းတွေနဲ့ တခြားသော ပညာရပ်တွေကိုလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ စကားပြောအရေးအသားနဲ့ ရှာဖွေရေးသား တင်ပြထားပါတယ်။ တားရော့ချစ်သူတို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေ။
ကဲ….. ဆက်လေ့လာလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ။ ။
တားရော့ကိုစတင်ဟောပြောတော့မယ့်လူတိုင်း ဟောကိန်းတွေကို အလွတ်ကျက်ထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ ယေဘုယျဟောကိန်းတွေပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တားရော့ပေါက်မြောက်လာရင် ကိုယ်ပိုင်ဟောကွက်တွေ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ…. ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ဟောကိန်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ။
(ဟောကိန်းများကို PDF ဖိုင်ဖြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဖတ်ရှုရန်အတွက် ပေးထားသောနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းဖတ်နိုင်ပါသည်။ သိမ်းလိုသူများအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါမည်)
(ကျန်ရှိနေသော တားရော့ဟောကိန်းများကို ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်)
Like this:Like Loading...	7 comments on “တားရော့ပညာရပ်”
Anonymous on November 19, 2014 at 3:37 pm said:
Cassoe on May 15, 2014 at 7:53 am said:
အရမ်းးကြိုက်တယ်..စောက်၇မ်းမိုက်တယ် တားရော့ ကို အရမ်းဝါသနာပါတယ်.
Anonymous on May 12, 2014 at 3:30 am said:
min datha on December 10, 2013 at 8:55 pm said:
please explain me the Ace 0f cup card…..thanks…
thiri bo on November 21, 2013 at 4:42 am said:
ဟောကိန်း Link တွေကရတော့ဘူး..:(
အရမ်းသိချင်နေလို့ ..ပြန်တင်ပေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ..အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မှာပါ..
aung on January 31, 2012 at 5:58 pm said:
တားရော့ ဟောကိန်းများ က ဖတ်လို့မရတော့ဘူးခင်ဗျ။
အောင်ပိုင် on August 26, 2011 at 8:04 am said:
လာလည်သွားတယ် ဥက္ကာကိုကိုရေ အောင်ပိုင်လည်း သံတွဲမှာ နေခဲ့ဖူးပါရဲ့း)))))x- http://koaungpaing.com